BUKA: Abukeka kanje amaphaphu omuntu obhemayo | News24
BUKA: Abukeka kanje amaphaphu omuntu obhemayo
(ISEXWAYISO: Izithombe eziqukethwe kulolu daba zingabaphatha kabi abanye.)
Cape Town – Sonke siyazi ukuthi kunokuhlobana phakathi kokubhema ne-asthma, kodwa bancane kakhulu abantu abakuqondayo ukuthi ungakanani umonakalo ongadalwa ukubhema emaphashini akho.
Ngisho nokuhogela intuthu edalwa ukubheka komunye umuntu, ngisho wena ungabhemi, kungakudalela umonakalo omkhulu esikhathini esizayo.
Ngokusho kwenhlangano eyenza ucwaningo, i-Asthma UK, bangu-82% abantu abane-asthma abathi ugwayi uyabahlukumeza kakhulu. Laba baba nenkinga emaphashini, nokwenza bangakwazi ukuphefumula kahle.
Ukubhema akudali nje kuphela umonakalo emaphashini, kodwa kungadala izimpawu ze-asthma, okukanye uhlaselwe yi-asthma.
Zibonele ukuthi ubukeka kanjani umonakalo odalwa ukubhema ngezansi:
Ngasesandleni sokunxele iphaphu elijwayelekile neliphile kahle kanti ngasesandleni sokudla yiphaphu eselikhahlanyezwe ukubhema.
Uma ngabe amaphaphau esedlavazwe ukubhema kuba nzima ukuthi adlulise umoya ohlanzekile (oxygen) emzimbeni. Amakhemikhali kagwayi avala izimbombo zamaphaphu.
La makhemikhali enza nokuthi amaphaphu angabe esakwazi ukwenza umsebenzi wawo wokulwa nokungcola kanye namanye amagciwane nokwenza ukuthi amagciwane ande.
Amaphaphu omuntu aphile kahle aba nombala o-pink kanti amaphaphu omuntu obhemayo wona aba mnyamana okwelahle ngenxa yoketshezi olumnyama oludalwa ukubhema.
Ucwaningo olwenziwa yi-Why Quit, luthi umuntu angakwazi ukubuyisela esimweni amaphaphu akhe uma ngabe eyeka ukubhema, kodwa lokho kungathatha isikhathi eside, kuncike ekutheni wena usunesikhathi esingakanani ubhema.
Usuku lokuqala ngemuva kokuyeka ukubhema: Izinga le-oxygen emzimbeni wakho likhula lifinyelele esikalweni esijwayelekile. Izinga lomoya ongcolile (Carbon monoxide) liyehla lifinyelele ezingeni elijwayelekile.
Inyanga yokuqala ngemuva kokuyeka ukubhema: Amaphaphu akho akwazi ukuhambisa kahle i-oxygen kanti nokwethuka noma ukungaphatheki kahle ngenxa yokuthi uyeke ukubhema kufanele kube sekuphelile.
Unyaka wokuqala ngemuva kokuyeka ukubhema: Ubungozi bakho bokuba nezifo eziphathelene nenhliziyo, ukuhlaselwa yisifo senhliziyo kanye nesifo sohlangothi (stroke) sekwehle ngaphezu kukahhafu okunalokho komuntu obhemayo.
Iminyaka eyishumi yokuqala ngemuva kokuyeka ukubhema: Ubungozi bakho bokuba nomdlavuza wamaphaphu, owomlomo, owomphimbo kanye nowezinso buyehla kakhulu.